Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Nambara ny mpandresy ny S.Pellegrino Young Chef Academy Award
Ny fikarohana talenta mampientam-po indrindra ho an'ny tanora chef eran'izao tontolo izao, noforonin'ny S.Pellegrino Young Chef Academy mba hikolokolo ny hoavin'ny Gastronomie, tonga tamin'ny fanakatonana mampientanentana ny harivan’ny Sabotsy 30th Oktobra. nandritra ny Grand Finale of S.Pellegrino Young Chef Academy Fifaninanana 2019-21, aorian'ny fandrahoan-tsakafo fifaninanana, Jerome Ianmark Calayag, misolo tena ny UK sy ny Faritra Eoropa Avaratra, no nambara ho mpandresy amin'ny S.Pellegrino Young Chef Academy Award 2019-21. Mahavariana an'i Jerome “Legioma manetry tena” Ny Signature Dish dia noforonina tamin'ny fiaraha-miasa tamin'ny mpanoro hevitra azy, David Ljungqvist, dia nanaitra ny Grand Jury hajaina tamin'ny safidiny ny akora, ny fahaizany, ny fahaizany, ny hatsaran'ny lovia ary ny hafatra ao ambadiky ny lovia, nandresy ny fidirana avy amin'ny chef manan-talenta 9 hafa manerana izao tontolo izao.
Tamin'ny fandresena ny anaram-boninahitra malaza, Jerome Ianmark Calayag dia nitana ny tantara niaraka taminy tompondaka teo aloha Mark Moriarty (2015), Mitch Lienhard (2016) ary Yasuhiro Fujio (2018) fa ny tena zava-dehibe dia mijoro ho toy ny fanilo manome fahafaham-po amin'ny firosoany amin'ny dia mandrisika hanampy amin'ny famolavolana ny sakafo hohanina rahampitso. Nofidin'ny S.Pellegrino Young Chef Academy Competition's Grand Jury misy enina goavam-be amin'ny gastronomy manerantany - Enrico Bartolini, Manu Buffara, Andreas Caminada, Mauro Colagreco, Gavin Kaysen, Clare Smyth – Nambabo ny tontonana i Jérôme izay nahavariana ihany koa ny fenitry ny fifaninanana ankapobeny. Maneho fankasitrahana ny fianakaviana S.Pellegrino Pim Techamuanvivit izay nandray anjara tamin'ny fifaninanana tamin'ny traikefany, tao anatin'ny dingana samihafa, ary noho ny famerana ny areti-mifindra dia tsy afaka nanidina tany Italia tamin'ny hetsika Grand Finale.
Nampahafantarina ny fifaninanana tamin’ity taona ity telo loka vaovao izay mameno ny S.Pellegrino Young Chef Academy Award ary maneho ny finoan'i S.Pellegrino sy ny fanohanana ny hery manova ny gastronomie sy ny fiantraikany any ivelan'ny lakozia. Elissa Abou Tasse, misolo tena an'i Afrika sy ny Faritra Afovoany Atsinanana, miaraka amin'ny “zaridainan'i Adama” no mpandresy amin'ny Acqua Panna Award ho an'ny fifandraisana amin'ny gastronomy, amin'ny fahafantarana ny fahaizany manomana lovia sonia miaraka amin'ireo akora izay nanasongadina ny harenan'ny kolontsainy manokana ary maneho ny fifandraisana tonga lafatra eo amin'ireo kolontsaina samihafa. Callan Austin, avy any Afrika sy Afovoany Atsinanana, miaraka amin'ny "The ghost net" nahazo ny Loka S.Pellegrino ho an'ny andraikitra ara-tsosialy, notendren'i Sakafo natao tsara ho an'ny chef izay nanolotra ny fomba fanamboarana izay maneho tsara indrindra ny fitsipiky ny sakafo vokatry ny fomba fanao tompon'andraikitra ara-tsosialy. Ary farany, ny vondrom-piarahamonina an-tserasera an'ny Fitiavan-tsakafo tsara nomena azy Loka ho an'ireo tia fisakafoana tsara ny Sary avy amin'i Andrea Ravasio, avy amin'ny firenena Iberiana sy Mediteraneana, amin'ny maha-zaza mpahandro tanora izay naneho tsara ny finoany manokana tao anatin'ny loviany sonia “El domingo del campesino”.
Ny fifaninanana Chef tanora S.Pellegrino no asa fototra amin'ny S.Pellegrino Young Chef Academy tetikasa, natomboky ny S.Pellegrino tamin'ny taon-dasa, izay mikendry ny hikolokolo ny hoavin'ny gastronomy amin'ny alàlan'ny fitadiavana ireo talenta tanora sy ny fanomezana hery azy ireo amin'ny drafitry ny fanabeazana, ny fanoroana ary ny traikefa. Nahatalanjona kokoa noho ny hatramin'izay ity andiany amin'ny Fifaninanana ity, nahita ireo mpangataka avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao. Chef tanora 135 no nandany ny fifantenana savaranonando ary nandray anjara tamin'ny fandrahoan-tsakafo mivantana teo anoloan'ny tontolon'ny mpitsara iraisam-pirenena avy amin'ireo firenena nandray anjara tamin'ny faritra 12. Tonga teo amin'ny Grand Finale ireo mpandresy isam-paritra amin'ny fifaninanana S.Pellegrino Young Chef Academy taorian'ny làlam-piofanana izay, noho ny fanohanan'ny Chef Senior iray, dia afaka nanadio ny lovia nosoniaviny.
Ny hetsika 3 andro dia niafara tamin'ny sakafo hariva manokana. Ilay goavambe momba ny gastronomie Massimo Bottura miaraka amin'ny ekipany - Takahiko Kondo, Riccardo Forapani, Francesco Vincenzi, Jessica Rosval, Bernardo Paladini - avelao ny vahiny hiaina ny tena toe-tsaina ao amin'ny S.Pellegrino Young Chef Academy, tontolo misy talenta, famoronana, fanavaozana, fitiavana ary matihanina. Massimo Bottura, amin'ny maha Master of Ceremony sy Mentor manentana fanahy azy, dia niara-nijoro tamin'ireo chef dimy, mba hamoronana fotoana tsy manam-paharoa sy tsy manam-paharoa dimy, izay samy manambatra ny fomba, ny fanahy ary ny tantaran'ny ekipany.
Stefano Bolognese, Talen'ny Sanpellegrino International Business Unit: “Tena mirehareha amin'ny hetsika Grand Finale izahay izay nanome anay fahafahana hifandray mivantana sy hahita ireo talenta mahazendana tokoa eo amin'ny asa, hamorona zavatra miavaka miaraka. Koa isaorana ireo rehetra nanatevin-daharana anay manerana izao tontolo izao nizara ny hafanam-po nandritra ireo telo andro ireo. Nahagaga izany. Tena namirapiratra tokoa i Jérôme teo anatrehan’ny Grand Jury hajainay, ary ny fiarahabana mafonja indrindra no atolotray azy, miaraka amin’ny faniriana hitondra ny fitiavany sy ny fisainany ho eo ambony latabatra hanampy amin’ny famolavolana ny sakafo hohanin’ny ampitso. Te-hisaotra ireo tanora talenta rehetra, mpandray anjara amin'ity dia manentana ny fanahy ity ary efa mpikambana ao amin'ny S.Pellegrino Young Chef Academy izahay: izy ireo no mpandova lalao amin'ny ho avy ary mirary soa ho azy ireo izahay ary hanana asa mahafinaritra. Tsy mijanona ny fikatsahanay talenta amin’ny famoronana ary tsy andrinay ny hanambara antsipiriany bebe kokoa momba ny andiany manaraka amin’ny fifaninanana S.Pellegrino Young Chef Academy”.